Ukuzikhulula - Abenzi besigidi
Zonke izimpawu zokuhweba, ama-logo, namamaki wensizakalo akhonjisiwe abhalisiwe kanye / noma Izimpawu zokuthengisa ezingabhalisiwe zabanikazi bazo. Ukuphinda kukhiqizwe ngokuphelele noma nganoma yiluphi uhlobo ngaphandle kwemvume ebhaliwe kuyenqatshelwe. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Imininingwane enikezwe kule webhusayithi yenzelwe imininingwane kuphela, ngakho-ke, abasebenzisi / izivakashi akufanele zenze izinqumo ngokususelwa kuyo. Kunconywa kakhulu ukuthi bonke abasebenzisi babheke izeluleko zochwepheshe abazimele ngaphambi kokwenza noma yiziphi izinqumo ezinomthelela wezezimali, wokuziphatha noma wezomthetho. INkampani ayinacala nganoma ikuphi ukungahambisani noma ukungalungi ngaphakathi kolwazi olunikeziwe. Inkampani kungenzeka noma ingabi ngumhlinzeki wangempela walezi zinsizakalo ezichaziwe, ngenxa yalesi sizathu, iNkampani inomsebenzi wokuphatha ukulethwa kwezinsizakalo ngokuhambisana nobudlelwano besivumelwano.
The MillionMaker.com iwebhusayithi ihlinzekwa ngesisekelo esithi "NJENGOBA KUNJALO" nangokuthi "NJENGOBA KUNGATHOLAKALA" ngaphandle kokumelwa noma ukugunyazwa okwenziwe futhi ngaphandle kwewaranti yanoma yiluphi uhlobo noma ngabe ivezwa noma ishiwo, kufaka phakathi kepha kungagcini kumawaranti ashiwo ekhwalithi egculisayo, ukufaneleka ngenhloso ethile, ukungaphuli umthetho, ukuhambisana, ukuphepha kanye nokunemba. Noma isiphi isikweletu kanye naso sonke isikweletu esingavela ekufinyeleleni nasekusebenziseni amawebhusayithi ethu, noma ngabe kungenxa yobudedengu, ukwephula umsebenzi noma ngenye indlela, asifakwa ezingeni elivunyelwe umthetho.
Okuqukethwe MillionMaker.com Iwebhusayithi ingemininingwane ejwayelekile kuphela futhi ayenzi izeluleko ezisemthethweni noma ezinye izeluleko zochwepheshe. Konke ukunakekelwa okufanele kuthathiwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi imininingwane enikezwe kumawebhusayithi ethu inembile futhi isesikhathini, futhi asikwazi ukwamukela umthwalo wemfanelo nganoma imiphi imiphumela evela ekuthembekeni ekusebenzeni kolwazi olujwayelekile njengoba kushiwo ngaphambili. Ukusetshenziswa kwakho kwamanye amawebhusayithi ethu akubakhi abameli / umeluleki / umeluleki - ubudlelwano bamakhasimende MillionMaker.com, futhi lokho kusebenza akukhona ukutholwa kwezeluleko zomthetho noma ezinye izeluleko ezivela ku MillionMaker.com. Bonke abasebenzisi bamawebhusayithi ethu, noma ngabe abasebenzisi bangamakhasimende akhona eMillionMakers.com, bayelulekwa ukuba baxhumane nathi kanye / noma bathathe izeluleko ezifanelekile ngaphambi kokuba bazibophezele kunoma yisiphi isenzo noma bathathe noma isiphi isinqumo mayelana nezinsizakalo eziceliwe.
Incorporation kanye ne-LLC Formation Services
I-Incorporation kanye ne-LLC Formation Services ifaka phakathi ukulungiswa nokulayishwa kwamaphepha okwakheka embusweni wakho, ngokuya kuphela kulwazi olunikezwe nguwe uku-oda insizakalo futhi izothunyelwa ngokuzibeka wena engcupheni. Ngokuhambisa imibhalo yokwakhiwa kwezinkampani embusweni wakho, ABENZI BAMAZIGIDI ngeke baqinisekise noma bazame ukuqinisekisa ukuthi imininingwane esemibhalweni yokwakheka inembile, ifanele noma iphelele. Futhi kungumsebenzi wakho ukuthola nokugcina imvume ngaphambi kokuqoka i-ejenti ebhalisiwe / yokuhlala enkampanini yakho. Ngaphezu kwalokho, asinasibopho sokuqinisekisa ukuthi konke ukufakwa kombuso wakho noma izidingo zokwakheka kwe-LLC seziqediwe, futhi asinasibopho sokukweluleka noma ukukukhumbuza nganoma yiziphi izidingo noma izibopho, kufaka phakathi, kepha kungagcini kunoma yisiphi isimo esidingekayo noma ukufakwa kweFederal, imibiko yonyaka, izintela okufanele zikhokhwe. Ngaphezu kwalokho, ngaphambi kokusebenzisa izinsizakalo zethu, kungumsebenzi wakho kuphela ukukhetha Ifomu Lenkampani lebhizinisi lakho (C-Corporation, S-Corporation, LLC, Partnership, Private Limited noma Limited).
Ukukhanselwa kwe-Order Service
Uma noma imuphi i-oda yezinsizakalo zethu likhanseliwe ngemuva kokuthi sesitholile inkokhelo, imali ephelele izobuyiselwa ngaphandle kwemali yokufaka engu- $ 50.00. Noma imuphi i-oda elicubungulwe ngokwengxenye alibuyiselwa.
IMENYAKA EYENZIWA IMillion akuyona INDLELA YOMTHETHO. I-Million Makers yinkampani yokugcwalisa imibhalo kanye nokucwaninga kuphela. Imininingwane enikezwe MillionMaker.com inikezwa ngezinhloso zolwazi ezijwayelekile kuphela. Iwebhusayithi, MillionMaker.com, ungumnikazi ngokuphelele futhi usebenza iMM LLC. Njengoba kushiwo ngenhla, iMM LLC (kufaka phakathi izinsizakalo ezinikezwe nge MillionMaker.com) ayiyona inkampani yezomthetho, futhi noma ngabe yibaphi abasebenzi baseMillion MAKERS abasebenza njengommeli wakho, futhi akukho esimeni lapho ulwazi olunikezwe kuleli sayithi noma kunoma yikuphi ukuxhumana komsebenzi okwenziwa ngabasebenzi be-MILLION MAKERS kuthathwa njengezeluleko zomthetho. Ngaphezu kwalokho, lolu lwazi aluhloselwe futhi akufanele lusebenze njengokungena endaweni yezeluleko zomthetho. Ngoba umthetho uhlala uguquka, imininingwane ekulesi siza ayikwazi ukuqinisekiswa ukuthi ilungile, iphelele noma iyinto yamanje. Kunconywe ukuthi ubone ummeli mayelana nezinsizakalo zakho zokufuduka, izinsiza zezemfundo, ukwakheka kwebhizinisi, uphawu lwentengiso, amalayisense ebhizinisi, ukubonisana ngezimali, izinsizakalo zezezindlu, ibhizinisi elithengiswayo, noma uma unemibuzo ethile engenakufinyeleleka kuleli sayithi noma uma ufuna izinga eliphakeme lokuqiniseka.
Ukulinganiselwa Kokulimala. Ukucabanga Kwezingozi. Ukuzikhulula kwamaWaranti.
OBENZA isigidi abakuboni sikweletu kunoma yimuphi umonakalo owenziwe nguwe, kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho, amaphutha, ukukhutshwa, ukulahleka kwedatha, ukubambezeleka ekusebenzeni noma ekudluliseleni, okungekho okulethiwe, ukucishwa kwamafayela noma i-imeyili, amaphutha, amaphutha, ikhompyutha amagciwane, noma ukuphazamiseka kwensiza kwanoma yiluphi uhlobo, noma ukwehluleka kokusebenza, ukwehluleka kwezokuxhumana, ukweba, ukucekela phansi noma ukufinyelela okungagunyaziwe kumarekhodi, uhlelo, imininingwane noma izinsizakalo ezingagunyaziwe. IMENYAKA EYESIBILI ayithwali sikweletu sekhwalithi, ukunemba, noma ukuba semthethweni kwemininingwane / imininingwane eqoqwe kusetshenziswa noma iyiphi insizakalo yethu. Ukusetshenziswa kolwazi oluqoqwe ngezinsizakalo ze-MILLION MAKERS kusengozini yakho. Akukho seluleko somlomo noma ulwazi olubhaliwe olunikezwe ngabenzi BAMALUNGU, abasebenzi bayo, abahlinzeki, abahlinzeki beqembu lesithathu, abahlinzeki, abanikezeli belayisense noma okunjalo, ngeke benze iwaranti noma ilayisense; futhi ngeke ube nelungelo lokuncika kulolo lwazi noma eselulekweni.
Uthatha umthwalo wemfanelo ophelele kanye nengozi yokusebenzisa kwakho izinsizakalo ze-MILLION MAKERS. OWENZA isigidi akuqinisekisi ukunemba noma ukuphelela kolwazi oluqukethwe kumasevisi alo. Izinsizakalo zabantu abasebenza ngokungemthetho zinikezwa ngesisekelo "njengoba sikhona", futhi "njengoba sitholakala" ngesisekelo. Kungumsebenzi wakho ukuhlola ukunemba, ukuphelela kanye nokusebenziseka kwalo lonke ulwazi nemiphumela yokusesha enikezwe kwiwebhusayithi yethu noma okuthunyelwe ngomlomo ngabasebenzi baka MILLION MAKERS.
Azikho izethulo noma ama-warranties, aveza noma aveziwe, anikezwa maqondana nemithetho noma eminye imiphumela evela ekusebenziseni kwethu izinsiza. Isikweletu sabenzi bezimali abangu-Million abavela isimangalo esivela ekusetshenzisweni kwezinsizakalo zethu sikhawulelwe kuphela kunani elikhokhelwe abenzi be-Million Makeers ukusetshenziswa okunjalo. Zonke izimangalo zomthetho ezivela ekusetshenzisweni kwezinsizakalo zethu ziyokhishwa enkantolo ezinkantolo zaseBelize
Esimweni lapho noma yiziphi izinhlinzeko zoMusho ozobanjwa zingabekezeleleki, lezo zinhlinzeko zizokhawulelwa noma ziqedwe ngezinga elincane kakhulu ukuze lesi Sivumelwano siqhubeke sisebenze ngokuphelele.
Sithathe iminyaka yesipiliyoni ekwenzeni ubungcweti bethu kanye nezinhlangano zomhlaba wonke kanye nokubambisana ukubonelela ngezinsizakalo ezinhle kakhulu nezisombululo kumakhasimende ethu ngamanani amaningi wokuncintisana.
Sakha amathuba abantu abaNye kanye nezinkampani zokuthola amasistimu angcono, amakhambi enziwe ngezifiso futhi enziwe izisombululo.
Imayelana NAWE. Sijwayelana kakhudlwana nawe, ibhizinisi lakho kanye nezinhloso zakho kahle ngaphambi kokuxoxa ngezindlela ongakhetha kuzo noma amathuba.
Ngokuhlangenwe nakho kwethu okukhulu nezinsizakalo ezahlukahlukene ezinikezwe yinkampani yethu, sisiza abantu, imindeni, amabhizinisi kanye nezinkampani ngobungcweti bethu obukhethekile ukuthutha, ukuxhasa, ukunweba nokukhulisa, sikulungele ukukunika indlela yempumelelo. Noma ngabe unentshisekelo yokufuduka, ukuhlangana nokutholwa noma ukufuna ukulayisha izinqubo zakho zehhovisi elingemuva, usesha imali noma umlingani onamasu noma ufuna uhlelo lwakho lokulandela isizukulwane esilandelayo, ukubonisana ngezimali nokusekelwa, noma ufuna izinsizakalo zezezindlu noma izinsiza ezihlobene nokufuduka noma imfundo phesheya noma izixazululo ze-IT esingakusiza kuzo zonke izinsizakalo esikhona ukuzeseka
Njengomuntu uqobo noma umnikazi noma uthishanhloko wenkampani ezimele noma eyinkampani, wonke umuntu akaphonswa inselelo hhayi ngokuphatha imisebenzi yansuku zonke, kepha, ngokuhlangana futhi nokuqinisekisa impumelelo yesikhathi esifushane neyabo yesikhathi eside. Kepha njengoba izindleko zenyuka nezidingo zokuhambisana zakha nezinselelo ezinkulu kakhulu, ungashiywa uzibuza ukuthi uzoqhubeka kanjani nokusinda - ungasasho ukuchuma - ngalesi sikhathi esisha, kulapho singena khona.
Isinyathelo Sethu Ngendlela Isinyathelo - Kusukela Kuqala Kuya Empumelelweni
Isinyathelo 1: Khomba izidingo ze-Individual / Family / Business / Corporates.
Isinyathelo 6: Iseluleko sezezimali nentela, uma sikhona.
Kubalulekile kakhulu ukukhetha umlingani ofanele izinhloso zakho kanye nezinhloso zakho, thina eMillion Makers sikulungele ukwenza isiqiniseko sokuthi uyaphumelela.
Amaklayenti ethu awumndeni wethu futhi sihlala simelela amakhasimende ethu ngozwela nokubekezela ukuze aqinisekise ukuthi ayaphumelela.
Abasebenzisi abasebenza isigidi bangabahlinzeki bodwa abaxazulula izixazululo, sinikeza ngezixazululo ezenziwe ngokwezifiso nezenzelwe abantu, imindeni, amabhizinisi kanye nezinkampani ezikusizayo hhayi ngaphakathi kodwa futhi nakwamanye amazwe ngezinto ezihlobene nokufika, ukufuduka kwabatshalizimali, ukufuduka kwebhizinisi, izimvume zomsebenzi , ubuzwe, imfundo yamazwe omhlaba, ukubonisana ngebhizinisi, izixazululo zebhizinisi, ukufakwa kwamazwe omhlaba, izixazululo ezenziwe ngokwezifiso ze-HR, ukuthengisa nokuthengwa kwebhizinisi, i-CRM Solutions, isango lokukhokha, ukwakheka kwenkampani ezindaweni zomthetho ezingama-98, ukuvulwa kwe-akhawunti yasebhange, ukubhaliswa kwezimpawu zokuhweba emazweni ayi-119 ngesicelo esisodwa nje ifomu, ukulayisensa kwebhizinisi, amahhovisi abonakalayo, izinombolo ezibonakalayo, ukwandiswa kwamazwe omhlaba, izinsizakalo zezomthetho, ukubalwa kwebhizinisi, ukwelulekwa kwezomthetho, ukubonisana ngezimali, ukululekwa kwezindlu, ukuphendukela ekuthengeni, imishini yokusebenza nezimali ezisebenzayo, ukukhuthala nokuhambisana ngezifiso izixazululo ze-IT njengokuthuthukiswa kweWebhu, i-Eco izixazululo ze-mmerce, ukuthuthukiswa kwezinhlelo zokusebenza, ukumaketha kwedijithali, izixazululo zesoftware nokuthuthukiswa kobuchwepheshe beBlockchain ukusho ezimbalwa ngamanani ancintisanayo ..
Izinsizakalo zethu ze-IT zinikezwa emikhakheni eminingi yamabhizinisi azo zonke izinhlobo nosayizi. Sikhonza izimboni ezilandelayo:
Ukusetshenziswa Kwebhizinisi Ngenqubo
Ukukhiqizwa Kwezolimo & Nocwaningo
Sinikezela ngezinsizakalo nokusekelwa ezindaweni ezishiwo ngezansi:
Njengomlingani waphesheya kwezilwandle, sinika amakhasimende ethu amandla okukhula ngokushesha futhi
okuningi okusimeme ngokukuxhakamfula endleleni yakho yokukhula.